Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Imiboniso bhanya bhanya » Inkwenkwezi ye-chess yaseGeorgia imangalela iNetflix ngokumbiza ngokuba yiRussia
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Imiboniso bhanya bhanya • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iintshatsheli ze-chess zaseGeorgia zenza isimangalo esichasene neNetflix ngokumveza ngokungekho mthethweni kuthotho lwazo.
INetflix ityholwa ngokuba sisini esibi kakhulu kwaye iyamjongela phantsi, kwaye iyabonakala ibubuxoki kuthotho lwabo lweTV.
UNona Gaprindashvili wafaka ityala lakhe lokungcolisa iNetflix kwiNkundla yeSithili yaseLos Angeles.
Umdlali wechess waseGeorgia uNona Gaprindashvili ufake isimangalo esixabisa i-5 yezigidi zeedola ngokuchasene neNetflix ngokuba 'ngumntu oxhaphaza ngokwesini' kwaye embonisa njengeRashiya kuthotho oluthi 'The Queen's Gambit' lowama-2021.
UNona Gaprindashvili, owasetyhini wokuqala ukuphumeza ubume be-chess grandmaster kunye neqela lesihlanu labasetyhini kwi-chess, ufake isimangalo ngokuchasene neNetflix ngokubhekisele kuye kumdlalo weqonga, obonisa umlingisi oyintsomi oqhubeka nokubetha abadlali abagqwesileyo baseRussia. eMoscow kwiminyaka yoo-1960.
“Kwesinye seziqendu ezazisusela ngonyaka ka-1968, omnye umhlalutyi wathi umdlali wechess uNona Gaprindashvili akazange ajongane namadoda. Kodwa ayilunganga, ”latsho igqwetha uMaya Mtsariashvili, iqabane kwiBBB, inkampani yamagqwetha yaseGeorgia emele umdlali.
Igqwetha longeze ukuba umsebenzi wabo kwityala uqalile kwakamsinya emva Netflix Ukukhutshwa kuthotho lweTV.
UGaprindashvili, i-80 ithathe inxaxheba kwinxalenye yokugqibela yenqaku elichaza "ekuphela kwento engaqhelekanga ngaye" isini sakhe.
“Kwaye ayisiyonto ingafaniyo ne- Rhashiya, ”Icandelo lesiqendu liyaqhubeka. "Ukho uNona Gaprindashvili, kodwa uyintshatsheli yehlabathi yabasetyhini kwaye akazange akhe ajongane namadoda."
Kwityala lakhe lokungcolisa igama lakhe elifakwe kwiNkundla yeSithili e-Federal eLos Angeles, kuthiwa uGaprindashvili uchaze loo nto "njengobuxoki obubonakalayo, kunye nokuziphatha gwenxa ngokwesini kunye nokuzithoba," kwaye wathi ngo-1968, wayejamelene ne-59 yamadoda chess. abadlali.
Isikhalazo siqhubeka sisithi: “Netflix ngokuxoka nangabom malunga nokuphumelela kukaGaprindashvili ngeenjongo ezingabalulekanga kunye nokuthandabuza 'zokuphucula umdlalo' ngokwenza kubonakale ngathi iqhawe lakhe eliyintsomi likwazile ukwenza into engazange yenziwe ngomnye umfazi, kubandakanya uGaprindashvili. ”
Umthetho ukwathi uGaprindashvili uyathukwa yile nto yokuba Netflix Umchaze njengomdlali waseRussia.
Abameli bakaGaprindashvili nabo bathi inkcazo ye Georgian njengesiRashiya yimeko "yokufumba isithuko esongezelelweyo ekonzakaleni" kwaye yenza inani lamabango malunga nobudlelwane phakathi kwala mazwe mabini.
Isithethi seNetflix sathi: "INetflix inentlonipho enkulu kakhulu kuNks Gaprindashvili kunye nomsebenzi wakhe oncomekayo, kodwa sikholelwa kwelokuba eli bango alinaxabiso kwaye liza kulikhusela ngamandla ityala."